Ndị ọkwọ ụgbọala | January 2020
Maka ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị nke kaadị vidiyo chọrọ ngwanrọ pụrụ iche, nsụgharị ya ugbu a. Ọtụtụ mgbe na ngwaahịa NVIDIA, ọ na-eme na ndị ọkwọ ụgbọala na-apụ n'ihi enweghị ihe kpatara ya. Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na NVIDIA kaadị ụgbọelu na-akụda E nwere ọtụtụ ụzọ isi dozie nsogbu a, na nke ọ bụla n'ime ha ga-atụle n'ụzọ zuru ezu n'isiokwu a.
Nbudata ndị ọkwọ ụgbọala maka Samsung SCX 3400
Mgbe ịzụtara ngwá ọrụ maka kọmputa, ọ dị mkpa na mbu iji mepụta njikọ ziri ezi na nhazi ka ihe niile wee rụọ ọrụ nke ọma. Usoro a na-emetụta ndị na-ebi akwụkwọ, ebe ọ bụ na iji rụọ ọrụ kwesịrị ekwesị, ọ dị mkpa ọ bụghị naanị njikọ USB, kamakwa ịnweta ndị ọkwọ ụgbọala kwesịrị ekwesị. N'isiokwu a, anyị ga-elele ụzọ 4 dị mfe ịchọta na nbudata ngwanrọ maka sistemụ Samsung SCX 3400, nke ga-aba uru maka ndị nwe ngwaọrụ a.
Ugbu a, ndị na-egwu egwu egwuregwu dị oké mkpa n'etiti ọtụtụ ndị ọrụ. A haziri ha maka oke nkasi obi n'oge egwuregwu. Enwere ike ịhazi ihe ọ bụla dị otú ahụ site na njirimara onye nwe ụlọ, ma ọ ghaghị ibudata site na iji otu ụzọ.
Ndị ọkwọ ụgbọala maka ngwaọrụ Xerox Phaser 3100 MFP
Ogologo oge Xerox abughi nani ndi okachapu ama: enwere ndi nbipute, scanners na, n'ezie, ndi nbipute multifunction di nso. Akụkụ nke ikpeazụ nke akụrụngwa bụ ihe kachasị achọ software - ọ ga-abụ na ọ gaghị arụ ọrụ na-enweghị ndị ọkwọ ụgbọala MFP kwesịrị ekwesị. Ya mere, taa, anyị ga-enye gị ụzọ maka inweta software maka Xerox Phaser 3100.
Ngwa kọmputa ọ bụla chọrọ software pụrụ iche iji rụọ ọrụ. Laptọọpụ nwere nnukwu ọnụ ọgụgụ dị otú ahụ, nke ọ bụla n'ime ha chọrọ ngwanrọ nke ya. Ya mere, ọ dị mkpa ịmara otú ị ga-esi wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka laptọọpụ Dell Inspiron 3521. Ịwụnye ọkwọ ụgbọala Dell Inspiron 3521 E nwere ọtụtụ ụzọ dị irè isi wụnye ọkwọ ụgbọala nke Dell Inspiron 3521.
Ka oge na-aga, n'ime ụwa dị elu, ọtụtụ ngwaọrụ na-egosi na enwere ike ijikọ na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ site na ọdụ ụgbọ USB. Na mbụ, ngwá ọrụ ụlọ ọrụ (ndị na-ebi akwụkwọ, igwe fax, scanners) bụ ndị nwere ụdị ngwaọrụ ndị ahụ, ma ugbu a, ọ dịghị onye nwere ike iju mini-refrigerators, oriọna, ọkà okwu, ọṅụ, keyboards, smartphones, mbadamba na ngwaọrụ ndị ọzọ na kọmputa.
N'ọtụtụ ọnọdụ, kọmputa desktọọpụ enweghị ọrụ Wi-Fi site na ndabara. Otu ngwọta maka nsogbu a bụ iji wụnye nkwụnye kwesịrị ekwesị. Ka ụdị ngwaọrụ a rụọ ọrụ nke ọma, ịchọrọ ngwanrọ pụrụ iche. Taa, anyị ga-ekwu banyere otu esi wụnye ngwanrọ maka onye na-arụ ọrụ D-Link DWA-525.
Nbudata ma wụnye ọkwọ ụgbọala maka GeForce 8600 GT kaadị vidiyo si NVIDIA
Ngwaọrụ ọ bụla arụnyere n'ime sistemụ kọmputa ma ọ bụ jikọọ ya na-achọ ndị ọkwọ ụgbọala na-eme ka ọrụ ya ziri ezi ma nwee ike. Kaadị kaadị ma ọ bụ kaadị vidiyo dị iche na nchịkwa a dị mfe. Isiokwu a ga-ekpuchi ụzọ niile ibudata ma wụnye onye ọkwọ ụgbọala maka GeForce 8600 GT site na NVIDIA.
Ihe ngosi Winchester na-emepụta Western Digital ka a maara maka ịdabere na ha, nke a na-akọwa gụnyere ngwanrọ dị mma. Taa, anyị chọrọ ịchọta ụzọ maka ịchọta ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka draịva siri ike site n'aka onye nrụpụta a. Ịwụnye ọkwọ ụgbọala maka HDD site na WD E nwere ọtụtụ nhọrọ maka nbudata ngwanrọ maka ngwaọrụ ndị a jụrụ.
Ngwaọrụ ọ bụla na-ejikọ na kọmpụta, ọ bụrụ nyocha ma ọ bụ nbipute, chọrọ ọkwọ ụgbọala arụnyere. Mgbe ụfọdụ, a na-eme nke a na-akpaghị aka, ma mgbe ụfọdụ enyemaka enyemaka dị mkpa. Ịwụnye ọkwọ ụgbọ ala maka Epson zuru okè 2480 Foto Epson zuru okè 2480 Nyocha foto abụghị ihe ọzọ na-achịkwa.
Ụzọ maka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka nkwụnye Wi-Fi TP-Link TL-WN821N
Iji rụọ ọrụ na ngwaọrụ ọ bụla ejikọrọ na kọmputa, ịchọrọ ngwanrọ pụrụ iche - onye ọkwọ ụgbọala, yabụ ị ga-achọpụta otu esi arụnye ya maka nkwụnye Wi-Fi TL-WN821N. TP-Link TL-WN821N ndenye ntinye ntinye ngwa ngwa E nwere ọtụtụ ụzọ isi mee ka nkwụnye Wi-Fi gị bụrụ nke arụ ọrụ zuru ezu.
Kaadị netwọk - ngwaọrụ site na kọmputa gị ma ọ bụ laptọọpụ nwere ike jikọọ na netwọk mpaghara ma ọ bụ Ịntanetị. Maka ọrụ kwesịrị ekwesị, ndị na-ahụ maka netwọk chọrọ ndị ọkwọ ụgbọala kwesịrị ekwesị. N'isiokwu a anyị ga-agwa gị n'ụzọ zuru ezu banyere otu esi achọta ihe nlereanya nke kaadị netwọk gị na ihe ndị ọkwọ ụgbọala dị maka ya.
Download ndị ọkwọ ụgbọala laptọọpụ HP G62
Kọmputa laptọọpụ Hewlett-Packard na-ewu ewu n'etiti ndị ọrụ, mana iji hụ na ha arụ ọrụ na Windows OS, ndị ọkwọ ụgbọala ga-arụ ọrụ n'enweghị ike. N'okwu anyị taa anyị ga-ekwu banyere otu esi eme nke a na ndị nwe HP G62. Nhọrọ maka ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala maka HP G62 Ịnwere ike ibudata ndị ọkwọ ụgbọala na ngwaọrụ dị na ajụjụ, yana kọmputa kọmputa ọ bụla, n'ọtụtụ ụzọ.
Ngwaọrụ multifunction, nke jikọtara ngwaọrụ, chọrọ ndị ọkwọ ụgbọala maka ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị, karịsịa na sistemụ Windows 7 na nke ochie nke sistemụ arụmọrụ sitere na Microsoft. Ngwa nke MF3228 nke Canon abughi ihe ozo na iwu a, ya mere, na nduzi nke taa anyi ga elele uzo ndi isi acho ma chota ndi ozo maka MPP.
Ndi nwepu laptọọpụ ASUS K53S nke mgbakọ ọ bụla ga-adị mkpa iji wụnye ngwanrọ maka ngwa ahụ a kwadoro mgbe ịzụrụ ma ọ bụ reinstalling sistemụ. Nke a nwere ike ime ọbụna site na onye ọrụ nke na-enweghị nkà ma ọ bụ ihe ọmụma ụfọdụ, ebe ọ bụ na mmadụ nile dị mfe ma ghara ịchọ oge dị ukwuu.
Nbudata ndị ọkwọ ụgbọala maka HP Laserjet M1005 MFP
Ọ bụrụ na ị jikọọ ihe nbipute ahụ na kọmputa, ị na-eche eziokwu ahụ na ọ naghị arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụ anaghị arụ ọrụ ya niile, mgbe ahụ, nsogbu ahụ nwere ike ịbụ na ọkwọ ụgbọala na-efu. Na mgbakwunye, mgbe ịzụrụ ụdị ngwá ọrụ, ọ dị mkpa iji wụnye software na ngwaọrụ gị tupu ịmalite ọrụ.
HP LaserJet P2055 Mbipụta ọkpụkpọ
Nbudata ndị ọkwọ ụgbọala maka NVIDIA GeForce GTX 560
Kọmputa ọ bụla na-egwu egwu ga-enwe nnukwu vidiyo nke nwere ike ịdabere. Ma ka ngwaọrụ wee jiri akụ niile dị ya, ọ dịkwa mkpa ịhọrọ ndị ọkwọ ụgbọala ziri ezi. N'isiokwu a anyị ga-ele anya ebe ịchọta na otu esi arụnye ngwanrọ maka NVIDIA GeForce GTX 560 ihe ntaneti vidiyo.
Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala na laptọọpụ Dell Inspiron 15
A maara laptọọpụ Dell dị ka otu n'ime ngwọta kachasị na nkà na ụzụ na ahịa. N'ezie, maka ọrụ zuru oke nke ngwaike arụpụtara n'ime laptọọpụ ndị a, achọrọ ndị ọkwọ ụgbọala kwesịrị ekwesị. N'akwụkwọ anyị taa, anyị ga-ewebata gị usoro maka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka laptọọpụ Dell Inspiron 15.
Download ndị ọkwọ ụgbọala maka laptọọpụ Samsung R525
Otutu laptọọpụ nwere ọtụtụ ngwaike. Maka nkwekọrịta ziri ezi n'etiti components na sistemụ arụmọrụ, ọ dị mkpa ka ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa, na n'isiokwu taa, anyị ga-eme ka ị mara ụzọ maka inweta software a maka Samsung R525. Ndị ọkwọ ụgbọala maka Samsung R525 Usoro maka ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala maka laptọọpụ anaghị adị iche na nke maka otu ngwaọrụ.